5 Matanho Ekukunda paAccount-Yakavakirwa Kushambadzira Martech Zone
Account-based kushambadzira (ABM) iri kuwana nzvimbo pakati pevatengesi veB2B. Zvinoenderana neongororo ichangobva kuitwa, 2017 B2B Yakagadziriswa Maonero, 73% yevatengesi veB2B parizvino vanoshandisa kana kuronga kutora ABM muna 2017. Uye ndezvechikonzero chakanaka: ABM's ROI inogona kukunda mamwe mabhizimusi ekushambadzira eB2B.
ABM haisi zano idzva. Muchokwadi, vamwe vanopokana kuti ABM yanga iriko kwenguva yakareba sekushambadzira kwave nako. Iri zano rinobata account yega yega semusika, ichibvumira kubatana kwakazara pakati pekutengesa nekutengesa.
Nhasi, iri kuve nyore kushandiswa nevashambadziri nekuda kwekuwedzera kwekushandisa kwe data rakabatana uye yakasimba analytics mukati mekutengesa. Pamusoro peizvozvo, data iri kuwedzera chaiyo-nguva uye inotyisa kuburikidza neData-se-a-Service (DaaS) mapuratifomu. Aya mazano anobatsira vatengesi kuti vanzwisise zvirinani uye vaone maakaundi avo ane mari, izvo zvinovagadzirira kuti vakoshese zviwanikwa pavanenge vachiita iwo maakaundi kuburikidza nechitoro chekutengesa.
ABM yakatozove yepakati pebhizimusi redu rekuvandudza bhizinesi pano paDun & Bradstreet. Isu tinoshandisa data, analytics uye kubatana nekutengesa kuisa pamberi mikana mitsva.
Inonzwika zviri nyore zvakakwana, handiti? Kwete nekukurumidza. Kunyangwe ichiita senge yakapusa pamusoro, ABM inogona kuve yakaoma kuita inoda kuti kuitwe nekuchenjera uye nekuisa kubva kunhengo dzese dzechikwata chako.
Heano matanho mashanu ayo achakubatsira iwe kuvandudza inokunda ABM zano rebhizinesi rako.
Nhanho 1: Gadzira Matanda Anoshanda-Anoshanda
Tisati takura ABM kuDun & Bradstreet, isu takatarisa patsika yedu, kuenda-kumusika nzira uye mameseji, izvo zvaisanganisira kugadzira pfungwa yakavandudzwa yechinangwa uye yakagadziridzwa seti yetsika sechikamu chedu chizere chiratidzo chemazuvano.
Isu takagadzira mameseji sisitimu yakatenderedza manas ayo akabatanidza izvi nemapoinzi ekurwadziwa atinogadzirisa, ayo akaisa hwaro hwehurongwa hwedu hweABM. Hazvina mhosva kuti muchina wako wedhijitari wakanaka sei, kana iwe usina chinhu chakasiyana kuti utaure uye tsika inoitsigira, pamwe haungapfuure nemagetsi.
Kubva ipapo, takagadzira muchinjikwa-unoshanda "Tiger Matimu" akaumbwa nenhengo kubva kune yega yega yekutengesa mabasa. Zvikwata izvi, izvo zvakarongedzwa nevanhu, izvozvi zvave kugona kupaza zvetsika masirosi, zvichikurudzira kufunga kwakazara uye zviito zvine mutsindo kuona kuti mapurojekiti anoitwa nesimba rakazara rezvisikwa zvedu, analytics, tekinoroji, kutaurirana uye madhijitari zvikwata kutyaira ruzivo neumwe munhu.
Nhanho 2: Ziva maAccount Akakosha
Yako yekutanga haifanire kufambira mberi kudzamara zvese kutengesa uye kushambadzira zvabvumirana pane yakasarudzika account account uye, pakupedzisira, ako ekuvavarira mabhizinesi Ndeapi maficha kana hunhu hunoratidza yakakwira-kukosha account iwe (uye nashe wako)? Izvo zvese zvinoenderana nekambani yako, zvaunokoshesa, uye ndeipi data uye analytics mhando dzakaratidza kukosha kwekufungidzira munguva yakapfuura.
Tine rombo rakanaka kuDun & Bradstreet kuwana mukana kune zvakafanana data uye analytics kugona kwatinoita kukudziridza vatengi vedu. Isu tinoshandisa maitiro uye kukwezva analytic modhi kutitaurira isu ndiani angangorera hukama hwavo nesu, vatinogona kutengesa-kutengesa uye ndiani ane njodzi yekusavandudza.
Kudiwa kwekufungidzira mamodheru akavakirwa muchidimbu pakuita kwekufananidzira kutitaurira maakaundi uye mitsara yebhizinesi inopa mukana wakanakisa kwatiri. Semuenzaniso, mukuwongorora kwedu kwedu kwevatengi base, makambani akafanotaurwa kuti acharwa nekukura mune ramangwana riri pedyo ainyanya kuve nehanya nekutengesa kwedu uye kushambadzira mhinduro. Uye kudiwa kwekufungidzira mamodheru anotifambisa kupfuura izvo zvingangotengwa neaccount — zvinotibatsira kufanofungidzira kuti saizi yechibvumirano ingave ipi.
Kune chidimbu, isu tinotarisa kuenzanisa kutengesa mamodheru zvinoenderana nekuti isu takatove takabudirira nekutwasuka, saizi, maitiro ekutenga uye kugona kutenga. Sevhisi analytics Ongorora kuti ndeapi ekushambadzira-ekushambadzira anotungamira mukuvandudzwa, inova kiyi yekutarisa izvi zviwanikwa zvihombe kune avo vane njodzi uye yepamusoro-kukosha vatengi. Kutengesa uye kushambadzira kukoshesa kunozivisa nzvimbo dzakakosha dzekutarisa kune account-yakavakirwa kuenda-kumusika misika uye persona-based mameseji.
Nhanho 3: Craft Yako Persona-Yakavakirwa mameseji
Kutenga kweB2B kunosanganisira vakawanda vanopesvedzera uye vatengi, zvinoreva kuti iwe uchiri kufanira kukudziridza vanhu vakawanda vanoda mameseji chaiwo.
Uye ndinovimba, ikozvino zvawaona ako vatengi vanoyevedza, iwe unofanirwa kuve nekunzwisisa kuri nani kwekutaura navo. Kwete chete iwe unozogona kunongedza avo akakura matambudziko, marwadzo poindi uye zvinangwa, asi iwe zvakare unozogona kuona iyo chaiyo yekushambadzira nzira ivo ivo vanonyanya kushanda pairi. Izvi zvinobatsira kuona kuti iwe sei gadzirisa yako mameseji.
Kunyangwe iri kuburikidza neemail kana tsamba yakanangana, kana nzira yedhijitari, iwe unozofanirwa kugadzira yakangwara yemukati yekutengesa nzira iyo inotaura mutauro wavo uye inovabatsira kuzadzisa zvinangwa zvavo. Pakupera kwezuva, hazvisi zvako; ndezvavo. Ndiyo toni iyo inobatsira kuvhura mikova neakaomesesa akaundi account.
Nhanho 4: Inguva yeKuti
Sezvo iwe uchiita iwo ari pamusoro maitiro, zvakakosha kuti uvimbe neKPIs kuyera kukanganiswa kwemishandirapamwe yako uye kuzivisa ramangwana rekugadzirisa. Sangano rakabudirira reABM rine munwe paruoko rweaya mana metric:
Kuzvipira: Mune yemamiriro ekunze ebhizinesi inotongwa neruzha, nzira yakanakisa yekutyaira kubatika ndeyekuita ruzivo rwevatengi vejitengi. Izvo zvakakosha kuti utarise kwakakosha metriki senge kudzvanya kumapeji akakosha ekumhara, nguva yakashandiswa pa-saiti uye kushandurwa kwevatengi kuti uone kuti vanopindura sei vatengi ava kumeseji yako.
Kugutsikana Kwevatengi: Shanduko mukugutsikana kwevatengi dzakasungirwa kune rako ramangwana rezvemari kukura. Iwe unogona kuyera navo kuburikidza neako wega vatengi ongororo, hombe NetPromoter mamaki, bhizinesi software yekuongorora mapuratifomu uye kunyangwe enhau enhau hurukuro.
Mapaipi: Izvi zviri pachena, asi mhinduro padanho rega rega repombi yako yekutengesa inokupa chiratidzo cheyako vatengi kuzvipira. Kunyanya kubatirana iwe uine vatengi vako, iyo inowedzera pombi yako ichave.
Scale: Ichi ndicho chiratidzo chekupedzisira cheakabudirira zano reABM- nekuti pakupera kwezuva, hazvisi zvekutungamira zvakagadzirwa, asi maakaundi akahwinwa. Yakawanda zvakadii dhiri rako rekuwedzera rakawedzera? Iko yako yepakati kontrakiti kukosha yakura?
Nhanho 5: Usakanganwa Kuyera Zvese
Zvirongwa zveABM zvinoda nguva yekukura uye kukura. Rangarira, iwe unozoda data rakapfuma uye ruzivo rwekugadzirisa kusangana kwako uye kusimbisa yako account account. Kana ikachengetedzwa zvisina kukodzera, mikana yeABM inogona kumira. Uye kune kumwe kunyanyisa, hukama hweakaunzi hunogona kutora nekukurumidza, kudzikamisa kukura kwemamwe matanho ane chekuita neABM iwe auchiri kuda kutora.
Kuita shanduko kune yeABM zano kunogona kukubatsira iwe kuona nzvimbo dzako hombe dzekukura uye pakupedzisira tarisa kuhwina bhizinesi idzva. Asi zvinotora nzwisiso yakadzama yedata rako uye pamwe chete kubatana kwechikwata. Zvikasadaro, iwe unogona kunge uchirasikirwa nemikana yakakosha yekutyaira bhizinesi idzva kubva kune ako akakosha vatengi.
Tags: abmaccount based kushambadzirab2bbhizinesi kune bhizinesidnbDun uye bradstreet
Heano Nharaunda Yedu Inodakadza Kushambadzira Podcasts